7 Virtual Reality ဘို့မျှော်လင့်မထားတဲ့အသုံးအမှုများ - သတင်း Rule
7 Virtual Reality ဘို့မျှော်လင့်မထားတဲ့အသုံးအမှုများ
ကျနော်တို့ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည် VR မှလိုချင်တာတွေသိ: ပိုကောင်းတဲ့အာကာသ Simulator ကိုဂိမ်း. ဒီတစ်ခါလည်းရုပ်ရှင်တွေကျနော်တို့အတွက်ပတ်ပတ်လည်ကြည့်ရှုနိုင်, လွန်း. သို့သော်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အားဖြင့်မျှသာပုံဖော်သည်မဟုတ်. ဒါဟာအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဖန်တီးသူ၏အပြည့်အဝဖွင့်, ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးမနေရာတွေကို VR ယူပြီးသူ. ဤတွင် VR အချို့ကိုဥပမာကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားကြပြီမဟုတ်နိုင်ကြောင်းကိုအသုံးပြုသည်.
ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းပျော်စရာမဟုတ်ပါဘူး; သင်တို့ကိုပျင်းစရာကောင်းပြုပါရန်အိပ်ရာ၏အဆုံးအမထွက်ခွာစေသည်, ချမ်းသောကာလ၌ထပ်တလဲလဲတာဝန်များကို, မီးခိုးရောင်အဖြစ်မှန်သငျသညျနံသည်အထိ. VirZoom အပျင်းစရာအစိတ်အပိုင်းပစ်မှတ်ထား. ဒီ barebones, ခေါက်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ကယ်ကြီးတွေအမှတ်တံဆိပ် VR ကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးဂိမ်းသို့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းလှည့်. သင်ရုံ pedaling မဟုတ်ပါဘူး - သင်တစ်ဦးကြံ့ယင်ကောင်အောင်နေ, ကွင်းကိုစုဆောင်းသို့မဟုတ်သမျှ. ဒီနေရာတွင်ကလက်ငင်းဆန္ဒပြည့်အချို့ကိုင်, ဒီမှာစျေးကွက်အတွက်အရာအားလုံးထက်ထက်ပိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အချို့သော VR င်.
အကြပ်အတည်းပျော်စရာအောင် VR ဘို့မစောင့်နိုင်သ. ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့တစ်တွေလောက်လွှဲ မှနေ. ထဲသို့ငါ့ကိုလှည့်ပါလိမ့်မယ်!
MindMaze လေဖြတ်ကြုံတွေ့ကြသူလူများတို့သည်လည်းမိမိတို့ခြေလက်အင်္ဂါ၏ထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်ကူညီ VR တူးစင်အောင်သည်. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များရှိပြီးသားသုတသေနပွုပါပွီ, နှင့် VR အတွက်အားနည်းကိုယ်လက်အင်္ဂါ၏အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်လေဖြတ်လူနာစစ်မှန်သောဘဝ၌ သာ. အသုံးပြုရန်စေသည်. MindMaze လည်းဂိမ်းထဲမှာ process ကိုထုပ်, ဒါကြောင့်ပျင်းစရာကုထုံးတူလျော့နည်းကြည့်နှင့်ပိုပြီးပျော်စရာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့တူ. ဒါကအဘွားအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေသူမ၏ကိုယ်ပိုင်မြင့်မားရမှတ် beats ဘယ်လိုဖွင့်.
စစ်မှန်သော 3D: သင့်ရဲ့လူနာရဲ့အတွင်း Explore
သို့သော်ကျန်းမာရေးကိုသို့လူနာမြူဆွယ် VR ၏တစ်ခုတည်းသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုမဟုတ်ပါဘူး. EchoPixel ဆရာဝန်များက၎င်းတို့၏လူနာအတွင်းမြင်ယောင်ကိုကူညီသူတို့ရဲ့ VR 3D ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေသည်. အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကိုဆရာဝန်များက 3D အတွက်လူနာ Scan ဖတ်မြင်သည်အတိုင်းကောင်းစွာအဖြစ်ပိုကောင်းခွဲစိတ်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အချို့သောနည်းလမ်းများမှာသူတို့ကို manipulate ပေးနိုင်ပါတယ်.
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း၏လှိုင်းတံပိုး: ရုပ်ရှင်တွေမှတဆင့် Empathy တို့ဖြစ်ပါတယ်
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း၏လှိုင်းတံပိုးကလူတစ်ဦးအီဘိုလာရောဂါကပ်ရောဂါ-ဒဏ်ခတ်တိုင်းပြည်အတွင်းနေထိုင်သောလူများ၏စျေးမှာနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာခံစားရနိုင်တယ်လိုင်ဘေးရီးယားမှာခြောက်မိနစ်ရုပ်ရှင်, shot ဖြစ်ပါတယ်. ဒီအလားအလာကုလသမဂ္ဂနှင့်ဒုကဲ့သို့သောမတူကွဲပြားအဖွဲ့အစည်းများဆွဲဆောင်, ထိုသို့အခြေအနေများကိုကျနော်တို့တှငျနထေိုငျသူမြားအဘို့အစာနာမှုကြီးထွားစေရန်ကူညီပေးသည် (ယခင်က) ပင်စိတ်ကူးနိုင်ဘူး. ဒါဟာအစနက်ရှိုင်းသတင်းစာပညာသို့မချည်မနှောင်, သောသငျသညျအနညျးဆုံးအက US မှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုတစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းကိုဖမ်းစေ features တွေကိုစေသည်.
Samsung နှင့်ခြောက်လအလံများ: ရီးရဲလ်ရဲ့ Virtual ကြိတ်စက် Coaster
VR ခင်မှာ, ကျွန်တော်တို့နက်ရှိုင်းသည်ပြဇာတ်ရုံသို့အတှေ့အကွုံခဲ့, သင်တစ်ဦး CGI rollercoaster ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းအထူးဒီဇိုင်းအခန်းကို manipulate မှဟိုက်ဒရောလစ်အသုံးပြုရာ. ဒါဟာယခုအခါအတိတ်၏အရာပါပဲ, တစ်ကယ့်ကြိတ်စက် Coaster ကိုစီးစဉ်ကသင်ဟာအခုချိန်မှာ VR စီးနင်းဖမ်းနိုငျသောကွောငျ့. ခြောက်လအလံများသူတို့ရဲ့ကြိတ်စက် Coaster မှ VR နားကြပ်ကိုရောက်စေဖို့က Samsung နှင့်အတူပူးပေါင်း Entertainment ကပန်းခြံကုမ္ပဏီကြီး. အ VR အတွေ့အကြုံတွေကိုတချို့ကဂြိုလ်သားမိုးကောင်းကင်ထဲမှာအာကာသယာဉ်တိုက်ပွဲများနှင့်အတူကြိတ်စက် Coaster ကိုအစားထိုး, အခြားသူများစူပါ-Man အတွေ့အကြုံကပိုဆောင်ခဲ့ကြ၏စဉ်.
တကယ်တော့, ဒီကြိတ်စက် Coaster လျော့နည်းကြောက်စရာစေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့တူပုံရတယ်!
virtual Reality? အကြှနျုပျ၏ဝင်းထဲမှာ? ဒါဟာသင်ထင်ထက်ပိုပြီးယုံကြည်င်! ရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းများပြီးသား 3D မော်ဒယ်တွေအတွက် recreated နေကြတယ်, သူတို့စာရွက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်နေတခါထို့နောက် 2D မှ တွဲ. ထားတဲ့. VR ရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုပနျးဖွတရားရုံးကအတှေ့အကွုံမှာကလူကြကုန်အံ့အစားထက်ရုံမျှသာထိုရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမြင်ရလိမ့်မယ်. ဇူးရစ်တက္ကသိုလ်ပြီးသားရဲတပ်ဖွဲ့ကစိစစ်လွန်ပြီတဲ့သေနတ်ပစ်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခု recreated ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တရားသူကြီးများနှင့်ဂျူရီလူကြီး VR သို့ခြေကျင်တောင်တက်ခရီးကြမ်းယူမြျှောလငျ့နိုငျ.
အာကာသခရီးသွားအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာနေ့စဉ်ခရီးသွားဧည့်သည်အမှာစျေးကြီးဖြစ်သွား. ကံကောင်းတာက, အာကာသ၏ VR ခရီးစဉ်များအတွက်အစီအစဉ်များရှိပါတယ်. သို့သော်, ဆဲမှထွက်ရှိမယ့်လူရှိလိမ့်မည်, နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးခြင်းထက်အတန်ငယ်သိမ်မွေ့ဖြစ်ကြောင်းအန္တရာယ်တွေရင်ဆိုင်နေရ. နာဆာသူတို့ဘယ်သွားသွားအာကာသယာဉ်မှူးအိမ်ရဲ့သေးငယ်တဲ့အချပ်ကိုယူပါစေမယ်လို့ VR software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ Dartmouth ၏ Dali ပုတ်လိုက်ပါတယ်. တက VR ကမ်းခြေပေါ်ပျော်ပွဲစား၏ပနျးဖွသို့မဟုတ်သူတို့၏တစ်ခုလုံးကိုအိမ်မှာ Be, it would be something that would help those travelling to Mars immeasurably.
22618	4 virtual reality
← စိုးရိမ်ပူပန်လူတွေက၏ဦးနှောက်ကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားရိပ်မိနိုင်ပါစေ အန်းဒရွိုက် N က: Google က OS ကို၏အနာဂတ်ဖော်ပြ →